SECURITY SOMALIA | WANAAGSIDE.COM
Home / SECURITY SOMALIA
Afgooye Wanaagside.com Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) ayaa kulan la yeeshay hoggaamiyeyaasha gobolka Shabeellaha Hoose si uu uga wada xaajoodo sidii loo xoojin lahaa dagaalka ka dhanka ah al-Shabaab. Shirkan oo ahaa mid albabaabada u xiran ayaa la sheegay in ...
Ticis Wanaagside.com Milateriga dowladda Yemen ayaa magaaladda Tacis ku qabtay labo nin oo Soomaali ah kuwaasoo ay sheegeen iney u shaqeynayeen Kooxda Xuutiyiinta ee taageeradda ka hela Dowladda Iiraan. Warbaahinta dalkaasi oo ilo milateri soo xiganaya ayaa sheegtay in ciiddanka dowlada ...
Daawo Sawirada Shirkad Dhaqalaha Ugu Badan Siiso Al shabaab Oo Bixisay Lacago Dhaqalo Ah
4 days ago	Leave a comment 28 Views
Muqdisho Wanaagside.com Hay’adda Hormuud Telecome Foundation ayaa shalay Magaaladda Muqdisho ugu Qaybiyay deeq lacageed Qaar ka Mid ah Qoysaska Danta yar ee ku dhaqan Magaaladda Muqdisho. Qoysaskan ayaa waxaa laga soo Aruuriyay Qaar ka Mid ah Xaafadaha Degmooyinka Gobalka Banaadir,iyadoo qeybinta ...
Al shabaab Oo Awod Kula Waregay Degan Eey Ku Sugnayen Cidamada Kenya Iyo Somalida Wararkii Ugu Danbeyey
4 days ago	Leave a comment 45 Views
Diif Wanaagside.com Dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidanka dowladda Kenya, kuwa Jubbaland iyo xoogag ka tirsan Al-Shabaab ayaa ka dhacay saaka degaanka Diif ee gobolka Jubada hoose Sida wararku sheegayaan dagaalkaan ayaa yimid, kadib markii xoogag ka tirsan Al Shabaab ay ...
Daawo Sawirada Cidanka Xooga Dalka Oo Baritan Ku Samenaya Wado Eeysan Bulshada Marin Mudo 7 Sano ah
Marka Wanaagside.com Ciidanka Milatariga Soomaaliya gaar ahaan guutada 14-ka October ayaa howlgal gaar ah ka sameeyay wadada Isku xirta Deegaanka No-50 ilaa magaalada Marka oo mudo 7-sano ku dhaw aan la marin. Holgalka ay ciidanka ka sameeyeen Wadada isku xirta KM-50 ...
Daawo Sawirada Gaari Gordhawed Ku Qarxay Afaafka Hore Ee Xarunta Degmada Wardhigley
7 days ago	Leave a comment 31 Views
Wardhigley Wanaagsdise.com Waxaa maanta qarax ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lagu weeraray xarunta degmada Wardhiigley, waxaana qaraxan ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Qaraxan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ...
Qaraxyo Ka Dhacay Imaradka Carabta Iyo Haamo Shidal Oo Had a Gubanayo
Dubia Wanaagside. Com Qaraxyo ayaa laga maqlay Dekedda magaaladda Fujayrah ee dalka Imaaraadka Carabta, iyadoo wararku sheegayaan iney gubanayaan qaar ka mid ah haamaha shidaalka ee dekeddaasi yiilay. Sida ay dad goobjogayaal ah sheegeen Dayuuradaha dagaalka ee Mareykanka iyo Faransiiska ayaa ...
Deg Deg Injineer Turkiya Oo Gordhawed Ku Dhintay Qarax Kq Dhacag Muqdisho
Muqdisho Wanaagside.com Qarax duhurnimadii maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho caasimada Somalia ayaa waxaa ku geeriyooday nin injineer ah oo u dhashay dalka Turkiga. Qaraxan ayaa ka dhacay agagaarka isgoyska mashquulka badan ee Km-4 ee magaalada Muqdisho ka dib markii uu qarxay ...
Qarax Xoogan Oo Ka Dhacay Al-babka Hore Maxkamada Darajada Kowad Ee Gobalka Bari Faahfahin
Bosaaso Wanaagside.com Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in qarax xoogan oo dhaliyay khasaaro uu ka dhacay afaafka hore ee Maxkamada darajada koobaad ee gobolka Bari. Qaraxa ayaa la sheegay in lala beegsaday gaari uu lahaa guddoomiyaha ...
Nin Gordhawed Ciidamo Ku Weraray Qaraxyo Oo Gordhawed Qabten Ciidamanka Amaanka Muqdisho
Muqdisho Wanaagside.com Ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa goordhaw gacanta ku dhigay nin la sheegay in bambo gacmeed ku tuuray bar ciidanka booliiska ku sugnaayeen oo kutaala Degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir. Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in ninkan ay qabteen ciidamada booliiska ...
Dagalkii Shalay Ka Dhacay Garonka Kismayo Oo Lagu Edeyey In Laga Soo Abaabulay Xamar Cadeen
11 days ago	Leave a comment 55 Views
Kismaayo Wanaagside.com Jubbaland ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeysey iney faragelin iyo khalqal gelin dhinaca Amniga ku heyso magaalada Kismaayo kadib dagaal garoonka Kismaayo shalay galab ku dhexmaray Musharax Madaxweyne Cabdinaasir Seeraar iyo Ciidamada Jubbaland. War-Saxaafadeed ka soo baxay Maamulka Jubbaland ...
Werar Lagu Dilay Sarakil Al-shabaab & Talisyadii Ugu Weynaa Al-shabaab Oo Xalay Duqen Cirka Ah Lagu Bur-Buriyey
Jilib Wanaagside.com Weeraro cirka ah ayaa xalay lagu qaaday deegaano ka tirsan Jubada Dhexe oo ay maamulaan Al-Shabaab, iyadoo warar kala duwan uu ka soo baxayo duqeymaha dhacay. Sida wararku sheegayaan labo weerar ayaa xalay ka kala dhacday magaalooyinka Jilib iyo ...
Nin Hubka Iyo Sanada Ciidmada Ka Iibin Jiray Al shabaab Oo Xukun Manta Lagu Riday Arag Sawirkisa Iyo Maclumad Muhiima
MuqdishoWanaagside.com Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida ayaa xukun xabsi ah ku riday Cadow Cabdulle Axmed (Carab) oo lagu helay dambi ah in uu hubka iyo saanada kale ee ciidanka u iibin jiray Ururka Al Shabaab. Ciidamada amaanka ayaa gacanta kusoo ...
Daawo Sawirada Guutada Danaba Oo Al Shabaab Ka Sartay Deganka Bariire
13 days ago	Leave a comment 57 Views
Bariire Wanagside.com Ciidamo katirsan Milatariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa Kumaandooska ee loo yaqaan Danab ayaa dhawaan Xarakada Al Shabaab kala wareegay deegaan Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose. Ciidamada Danab ee la wareegay deegaanka Bariire ayaa ah ciidamo aad u hubeesan, waxa ...
Taliska Cidanka Boliska Oo Soo Qabtay Askari Manta Dilay Wada Bajaaj & Dhawacyna Dad Rayida
13 days ago	Leave a comment 42 Views
Muqdisho Wanaagside.com Ciidamada amaanka Soomaaliya ayaa ku guuleestay in gacanta kusoo dhigaan askari katirsan ciidanka booliiska Soomaaliya oo saakay nin Bajaajle ahaa ku dilay Isgooska Tarabuunka sidoo kale dhaawacay qof kale oo shacab ahaa. Taliye Kuxigeenka Ciidanka booliska Soomaaliya Jenaraal Zakiya ...
Daawo Sawirada Ciidamada Difaca Somaliya Oo Qabtay Gaari Siday Qaraxyo Lagu Werari Rabay Shacabka Muqdisho
XaawoCabdi Wanaagside.com Ciidamada Xoogga dalka ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay u fashiliyeen qarax gaari Hoomey lagu soo raray oo la damacsanaa in la soo geliyo Muqdisho, kaasoo ay ciidanka kaga hortageen deegaanka Xaawo Cabdi ee duleedka Muqdisho. Gaariga ayaa ku qarxay ...
Diyarado Dagaal Oo Duqen La Begsaday Ururka Argagixisada Dacishga Somaliya
15 days ago	Leave a comment 23 Views
Cal-miskaad Wanaagside.com Diyarado dagaal ayaa la soo sheegayaa iney duqeymo ka fuliyeen buuraleyda loo yaqaano Cal-miskaad oo ka tirsan gobolka Bari. Wararka ayaa sheegaya in duqeynta la lala beegsaday xubno ka tirsan kooxda Daacish, waxaana meelaha la duqeeyey ka mid ...
Deganka Bariire Oo Sakay Ku Wabirisatay Dagaal Kii Ebed Ugu Cuslaa Wararkii Ugu Danbeyey
16 days ago	Leave a comment 39 Views
Bariire Wanaagside.com Dagaal culus ayaa xalay ka dhacay degaanka Bariire oo hoos taga degmada Aw-dheegle ee gobolka Sh/hoose halkaasoo maalmo ka hor ciidamada Danab ay ka saareen xoogaga Al-Shabaab. Sida wararku sheegayaan dagaalka ayaa qarxay markii Xoogaga Al-shabaab ay xalay saqdii ...
Dhageysiga Dacwadii Kufsigii Iyo Dilka Loo Gestay Marxumad Caasho Oo 12 Jir Eheed Oo Manta La Furay
Garoowe Wanaagside.com Magaalada Garawe ee xarunta maamulka Puntland waxaa saakay ka bilaabatay dhageysiga dacwadaha loo heesto 10-nin oo lagu soo eedeeyay kufsi iyo dil argagax leh oo magaalada Garawe loogu geestay Caa’isha Ilyas oo aheyd gabar yar oo 12-sano jir ah. ...
Sarakil Al-shabaab Oo Gordhawed Isku Soo Dhibay Maamulka Juballand Akhriso Magacyada Sarakisha ISa Soo Dhiibay
28 days ago	Leave a comment 52 Views
Bardheere Wanaagside.com Taliska Hay’adada nabadsugidda iyo Sirdoonka Jubbaland ee NISA ayaa Goordhow waxa uu sheegay in labada Sarkaal oo ka tirsan Dagaalamayaasha Al-shabaab ay isku dhiibeen maamulka Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo. Jubbaland ayaa sheegtay in mid kamid ah Saraakiishii ka ...
April 21, 2019	Leave a comment 58 Views
Colombia Wanaagside.com Qaraxyo xoogan oo lala eegtay hoteelo iyo kaniisado ku yaal Sri Lanka ayaa waxaa ku dhintay 238 ruux halka ay ku dhaawacmeen ku dhowaad 450 qof oo u badnaa dad ku sugnaa Kaniisasaha. Sadex qarax ee ugu horeysay ayaa ...
April 19, 2019	Leave a comment 64 Views
SabiibWanaagside.comMadaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ay wehliyaan masuuliyiin iyo saraakiil ciidan ayaa maanta kormeer kedis ah ku tagay deegaanka Sabiib oo kuyaala duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Farmaajo iyo xubnaha la socday ayaa deegaanka Sabiib ku tagay diyaarad nuuca ...
April 19, 2019	Leave a comment 56 Views
MuqdishoWanaagside.com Madaxweynaha Cubba Miguel Diaz-Canel ayaa Telefoonka kula hadlay Madaxweyneyaasha Wadamada Soomaaliya iyo Kenya Uhuru Kenyatta iyo Maxamerd Cabdullahi Farmaajo waxayna kawada hadleen sidii loo sii deyn lahaa Dhaqaatiir Cuba u dhashay oo Kenya laga soo afduubtay. Miguel Diaz-Cane ayaa Twitter-kiisa ...